Nne na -echebara echiche - Bromley, Lewisham & Mindwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Ndị nwere uche
Ndị nwere uche na-enye onyinye, ndị otu na-akwụ ụgwọ na-akwụghị ụgwọ na-enyere ụmụ nwanyị aka ilekọta echiche uche na mmụọ ha mgbe ha dị ime na afọ mbụ nke nwa ha.
Kemgbe mmalite nke ọrụ ahụ na 2016, anyị akwadola ihe karịrị otu puku ụmụ nwanyị na Bromley, Lewisham na Greenwich.
Uche nwere uche na-enye ohere iji:
Jikọọ ụmụ nwanyị ndị ọzọ dị ime na ndị nne ọhụụ nwere ahụmịhe yiri ya
Mụta ndụmọdụ na usoro iji jikwaa mgbanwe ndị metụtara oge mgbanwe ndụ na-enwekarị nnukwu nsogbu na ọnwa ndị mbụ ka amuchara nwa.
Ndị otu a bụ maka ndị nne dị ime na ndị nne ọhụrụ nwere ụmụ ruru ọnwa iri na abụọ bi na mpaghara London nke Bromley, Lewisham na Greenwich.
Otu ọdịmma onwe onye maka nne ụmụ ọhụrụ 0-12 ọnwa na:
Ndị otu afọ ime n'ịntanetị maka ụmụ nwanyị ndị dị ime izu iri na abụọ ruo ogologo oge na Bromley, Lewisham na Greenwich: chọpụta ihe.
Otu dị n'ịntanetị postnatal maka ndị nne bi na Bromley, Lewisham ma ọ bụ Greenwich nwere ụmụ ọhụrụ 0-12 ọnwa: chọpụta ihe.
Otu diversity Matters nke onwe maka ụmụ nwanyị ndị ojii, Eshia na agbụrụ pere mpe nwere ụmụ ọhụrụ 0-12 ọnwa: chọpụta ihe. NB: A ga-enye ndị bi Lewisham ohere kacha mkpa n'ihi na nke a bụ ọrụ akọwapụtara Lewisham.
Ọrụ ime enyi na otu onye na Bromley maka ndị inyom dị ime na ndị nne nwere ụmụ ọhụrụ ruo otu afọ: chọpụta ihe.
Ọrụ ime enyi na otu na Lewisham maka ndị inyom dị ime na ndị nne nwere ụmụ ọhụrụ ruo otu afọ: chọpụta ihe. NB: A ga-ebute ụzọ nye ụmụ nwanyị ndị isi ojii, Eshia na agbụrụ pere mpe n'ihi na etinyere ego maka ọrụ a maka obodo ndị a.
Ndị nne na-eche echiche nke mpaghara gị
Anyị na-agba ọsọ otu ịbụ nna n'efu, nke na-enyere ụmụ nwoke aka ịmụtakwu banyere ilekọta onwe ha, ijikwa mgbanwe na ihe ịma aka nke ịbụ nne na nna na ịkwado onye òtù ọlụlụ ha. Enwekwara ohere iji zute gbasara ndị nna obodo. Otu dị iche iche na-emeghe ndị nna na ndị dị ime nwere ụmụaka ruo afọ abụọ.
Ịbụ nna otu ntanetị maka ndị nna na Bromley, Lewisham na Greenwich: chọpụta ihe. NB: A ga-enye ndị bi Lewisham oghere ụzọ, n'ihi na nke a bụ ọrụ pụrụ iche Lewisham.
Ịbụ otu onye-mmadụ maka naanị ndị nna Lewisham: chọpụta ihe.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla gbasara Mindful Mums, biko zitere gị email mindfulmums@blgmind.org.uk ma ọ bụ jiri ụdị dị n'okpuru.
Koodu gi (choro)
Kedụ ka ịnụ gbasara Mindful Mums? (chọrọ)
---Ogene UmuakaGPOnye Nleta AhụikeMidwifeAkwadoro site na enyisearch engineelekọta mmadụ mediaBLG Mind weebụsaịtịNdị ọzọ
Onu ogugu umuaka / umuaka na aro ha (choro)
Ihe ndetu ma ọ bụ ozi ọzọ